संविधान निर्माण प्रक्रिया मैले चाहेर पनि रोक्न सक्दिनँ: प्रधानमन्त्री कोइराला « Nepal24Hours.com – 'Integration Through Media'
संविधान निर्माण प्रक्रिया मैले चाहेर पनि रोक्न सक्दिनँ: प्रधानमन्त्री कोइराला
२१ माघ २०७१, बुधबार ००:५७ मा प्रकाशित
काठमाडौं, २० माघ । प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालाले प्रश्नावली प्रस्ताव समिति खारेज गर्नुपर्ने एकीकृत नेकपा माओवादी नेतृत्वको मोर्चाको शर्त कुनै हालतमा स्वीकार नगर्ने बताएका छन् । कोइरालाले एमाओवादीको आन्दोलनको डर, धाक, धम्की र घुर्कीसँग डराएर संविधान निर्माण गर्न बाट पछि नहट्ने बताएका छन्।
प्रधानमन्त्री कोइरालालाले मंगलबार बिहान बालुवाटारस्थित आफ्नै निवासमा सञ्चारकर्मीसँग कुरा गर्दै भने वार्ताका लागि मैले लचिलो भएर पार्टीभन्दा माथि उठेर देशको प्रधानमन्त्रीका नाताले गेट क्र्यास गरी प्रचण्डजीकहाँ गएँ । तर, उहाँले प्रश्नावली समिति खारेज गर्नुपर्ने सर्त राख्नुभयो । संविधान लेखन प्रक्रिया अगाडि बढिसक्यो । संविधान सभाले बनाएको प्रश्नावली निर्माण समिति रोक्ने म को हुँ ? प्रक्रिया संविधानसभाले शुरु गरेको हो, मैले होइन । मैले रोक्न सक्दिनँ । मलाई रोक्ने अधिकार पनि छैन । प्रचण्डजीले मसँग प्रश्नावली समिति खारेज गर्नुपर्छ भन्नुभयो । किन खारेज गर्ने ? म ससर्त वार्तामा बस्दिनँ । प्रक्रिया अगाडि बढिसक्यो ।’
प्रधानमन्त्री कोइरालाले एमाओवादीले आफ्नो हठ त्यागेर वार्तामा आउनुपर्ने भन्दै वार्तामा नआए दुई तिहाह बहुमतको प्रक्रिया अगाडि बढ्ने बताए । उनले वार्ता र सहमतिको नाममा प्रक्रिया नरोकिने भन्दै आम नागरिक सबै प्रक्रियाबाट जतिसक्दो चाँडो संविधान जारी होस् भन्ने पक्षमा रहेको बताए ।
प्रधानमन्त्री कोइरालाले एमाओवादीले संविधान बन्न नदिनका लागि विभिन्न जातजाति र समुदायलाई भड्काउन खोजेको आरोप लगाउँदै नयाँ संविधानमा सबैको अधिकार र पहिचान सुनिश्चित गर्ने दाबी गरे । प्रधानमन्त्री कोइरालाले एमाओवादी नेतृत्वको आन्दोलनलाई नागरिकले साथ नदिने दाबी पनि गरे ।